Saraakiisha Ciidamada DKMG ah ee Gedo oo ka hadlay dagaalo halkasi ka dhacay – SBC
Saraakiisha Ciidamada DKMG ah ee Gedo oo ka hadlay dagaalo halkasi ka dhacay
Saraakiisha Ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya kuwooda dagaalka kaga jira gobolka Gedo ayaa ka hadlay dagaalo 2maalin ee ugu dambeeyay ka dhacayay gobolkaasi kaas oo dhaliyay khasaare Naf iyo maal leh .
Dagaaladani ayaa dhexmaray Ciidamada DKMG ah ee Soomaaliya iyo kuwa Xarakada Shabaab Almujaahidiin ee ku sugan gobolkaasi Gedo iyadoo sida la xaqiijiyay dagaalada intooda culusi ay ka dheceen deegaan lagu magacaabo Bohl Bashiir oo hoostaga degmada Luuq.
Gudoomiyaha DKMG ah ee gobolka Gedo Maxamed C/Kaliil oo la hadlay Xafiiska SBC International ee Caasimada Dalka ee Muqdisho ayaa sheegay in dagaaladii ka dhacay Bohol Bashiir ay ka gaareen guulo wax ku ool ah islamarkaana ay jebiyeen ciidamada xarakada Alshabaab oo uu sheegay in halkaasi ay weerar ku soo qaadeen .
Waxa uu intaasi raaciyay Mr Kaliil iyo dagaalada ay ahaayeen kuwo culus dhankoodana ay ka soo gaartay khasaare 1 askari uu ku geeriyooday halka 4 kalena ay kaga dhaawacmeen sida uu hadalka u dhigay, waxaanu sheegay in khasaare ba’an ay u geysteen dhinaca Alshabaab oo uu sheegay in ay ka dileen tiro adkar kor u dhaafeysa 10 hubkii ay wateena kala wareegeen.
Xaalada ayaa degen iminka waxaana laga soo sheegayaa deegaanadii lagu dagaalamay iyo qaar ka mid ah magaalooyinka gobolkaas xiisad kacsan iyo dareen isku hub urursi ay wadaan labada dhinac waa dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo Xarakada Alshabaab.
Sikastaba ha ahaatee Maxamed Cabdi Kaliil gudoomiyaha Dowlada KMG ah ee Gedo ayaa been Abuur ku tilmaamay in dagaalka ay ku jiraan ay kala qeyb qaadanayaan ciidamo ka soda dalalka deriska sida Itoobiya isagoona sheegay in ay wararkaasi yihiin kuwo aan sal iyo raad toona laheyn islamarkaana ay dagaalka ku keli yihin ciidamada DKMG ah xiliyada soosocdana ay guud ahaan gobolka Gedo ay la wareegi doonaan.